Dagaalka ganacsiga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka careysiiyay dowladda Shiinaha, wuxuu sidoo kale soo jiitay qaar ka mid ah taageerayaashiisa oo dad Shiinaha u dhashay ay ka mid yihiin. | Hubsad News
Dagaalka ganacsiga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka careysiiyay dowladda Shiinaha, wuxuu sidoo kale soo jiitay qaar ka mid ah taageerayaashiisa oo dad Shiinaha u dhashay ay ka mid yihiin.
Bar Twitter-ka ah oo uu leeyahay nin u dhashay Shiinaha oo ku nool Mareykanka, wuxuu ku baahiyaa dhammaan farriimaha Trump oo afka Shiinaha uu ku turjumo. Wuxuu leeyahay in ka badan 100,000 oo taageerayaal ah, kuwaas oo badankoodu Trump u arkaan inuu yahay “qof u ololeeya xuquuqda aadanaha”.
Ugu yaraan afar saacadood maalintii, Jeff Ding, oo 45 sano jir ah, wuxuu si dhow ula socdaa barta Donald Trump uu ku leeyahay Twitter-ka ee @realDonaldTrump.
Farriin kasta oo uu soo dhigo Trump, Ding si degdeg ah ayuu u turjumayaa ereyada madaxweynaha ka dibna wuxuu ku sii faafiyaa @Trump_Chinese.
Ninkan oo ah lataliye dhanka injineeriyadda ah oo ka shaqeeya Los Angeles, wuxuu ku barbaaray gobolka Bartamaha Shiinaha, wuxuuna ka mid yahay seddax qof oo iskood isu xilqaamay oo wada maamula @Trump_Chinese.
Dhammaantood waxay taageersan yihiin Donald Trump, waxayna si adag u dhalleeceeyaan dowladda Shiinaha. Waxay doonayaan in “farriimaha Trump ay gaarsiiyaan dadka afka Shiinaha ku hadla ee caalamka oo dhan”, sida uu Ding sheegay.
Raggan oo sidoo kale farriimaha dowladda Shiinaha ku turjuma English-ka, wuxuu u jeedadoodu yahay in “asxaabtooda ay ka caawiyaan fahanka dowladnimada iyadoo loo marayo farriimaha Trump”.
Waxaa la aasaasay bishii September ee 2018 waxayna haystaan in ka badan 100,000 oo qof oo ku xiran boggooda, inkastoo iyagu ay ku xiran yihiin barta @realDonaldTrump oo keli ah.
“Ujeedadeenu waxay tahay inaan u adeegno shacabka Shiinaha ee daafaha caalamka, gaar ahaan kuwa dalka ku sugan ee awoodda u leh in ay VPN isticmaalaan si ay xeydaabka baraha bulshada ee dowladda uga dul boodaan”, ayuu yiri Ding.
Wuxuu ku turjumaa luqadda fudud ee Shiinaha ee laga isticmaalo dhul waynaha. Luqadda dhaqanka waxaa lagaga hadlaa Hong Kong iyo Taiwan.
Dowladda Shiinaha waxay dalkeeda ka xirtay dhammaan baraha dalalka Shisheeye laga leeyahay sida Twitter-ka. Xeyndaabka aan la arkin ee dalkaas iyo dibadda kala xira waxaa loo garanayaa Great Firewall.
Dadka magaalooyiinka ku nool qaarkood ayaa isticmaala VPNs – xiriirka dalxiiska gaarka ah – kaas oo kumbuyuutarka ka gudbinaya xeyndaabka dowladda una suuragelinaya in Twitter-ka ay isticmaalaan. Balse way adag tahay in la qiyaaso tirada dadka isticmaala ee Shiinaha ku nool.
Ding ayaa sheegay in “waxa ugu weyn ee ku dhiiragelinaya in uu howshan sii wado ay tahay in uu rumeysan yahay in Trump uu yahay madaxweynaha keliya ee sida weyn u taageera xuquuqda aadanaha ee Shiinaha ee taariikhda Mareykanka soo mara”.
Waxay isaga la tahay in dagaalka Trump ee ka dhanka ah ganacsiga Shiinaha uu cadaadis ku noqonayo koboca dhaqaalaha, taasna ay sababeyso dhaqaale xumo. “Waxay caqabad ku noqoneysaa Xisbiga Shuuciga ah ee CCP waxayna ku hoggaamineysaa burbur”.
Tan iyo bilowgii ololihiisa, Trump wuxuu “Shiinaha” u adeegsaday kicinta taageerayaashiisa.
“Ma ogolaan karno in Shiinaha uu sii wado kufsiga dalkeena, taas waa waxa ay inagu hayaan hadda,” ayuu Trump si joogto ah ugu celceliyay xilligii ololaha.
Ereyadaas waxay aalaaba helaan sacab iyo sawaxan muujinaya taageero. Balse madaxweyne ahaan, dagaalkiisa ganacsiga wax badan ma uusan ka joojin.
Tallaabooyiinka adag ee Trump ee ka dhanka ah ganacsiga Shiinaha waxaa ka dhashay xiisad adag oo labada dal soo kala dhexgasha, waxayna si joogto ah usoo kala jiidanayeen dad kala taageersan Washington iyo Beijing.
@Trump_Chinese wuxuu aalad u noqday mucaaradka iyo dadka diidan dowladda Shiinaha. Markasta oo Trump uu soo dhigo farriin uu ku dhalleeceynayo Shiinaha, boggan wuxuu helaan farriimo badan oo taageerayaasha kaga yimaada iyo kumannaan qof oo ku soo biira dadka ku xiran.
Bishii May, Trump wuxuu ooda ka rogay farriimo badan oo ka dhan ahaa Shiinaha. Wuxuu canshuur dheeraad ah saaray alaabta dalkaas oo gaareysa 25 boqokiiba, una dhinagta $325bn.
Dadka afka Shiinaha ku hadla ee Twitter-ka isticmaala ayaa si farxad leh u soo dhoweeyay arrintaas iyagoo ra’yigooda ku qorayay @Trump_Chinese. “Shaqo wanaagsan! fadlan intaa ka sii adkee!” Go’aan sax ah oo caqliyeysan!”
Qof ayaa tallaabadaas ku tilmaamay “mid alle keenay” in dowladda Shiinaha laga adkaado. Mid kale ayaa sheegay inuu rajeynayo in Trump markale la soo doorto isagoo “caafimaad qaba”.